ဂိတ်အများဆုံးလမ်း နှင့် ဈေးအကြီးဆုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂိတ်အများဆုံးလမ်း နှင့် ဈေးအကြီးဆုံး
ဂိတ်အများဆုံးလမ်း နှင့် ဈေးအကြီးဆုံး
Posted by phone_kyaw on Mar 7, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါ။ ဒီလမ်းမှာ ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားခဲ့ဘူးတယ်။ ခြောက်လလောက်ကြာတယ်။ အဲဒိတုန်းကတော့ ကျောင်းသားသူပုန်တွေပါ။ ကျနော်တို့ တာဝန်က စစ်တပ်လာရင် ချောင်းပစ်ဖို့ ပါ။ ဂိတ်ဖွင့်ပြီး ငွေကောက်လို့ မရပါ။ သူတို့ က ငွေသာတောင်းတာ လမ်းပြင်ဖို့ တော့ မသိဘူးဗျ။ အဲဒိလမ်းက ကတ္တရာမရှိပါဘူး။ လမ်းကလည်း တောတောင်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရတယ်။ မြစ်ချောင်းတွေကို ကျော်တက်ရတယ်။ နာမည်ကြီး ဘုရားသုံးဆူတောင်ကြားလမ်းတစ်ခုပါ။ အစိုးရအနေနဲ့ ဒါတွေကိုလည်း ပြင်ပေးဖို့ လိုပါပြီ။
မိလယီထော- သံဖွူဇရပျ-ဘုရားသုံးဆူ မျောတျောကားလမျးတလြှောကျတှငျ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြားမှ ဝါးတားဂိတျမြားခထြားပွီး ဂိတျကွေးအကောကျကွမျးလာသဖွငျ့ မျောတျောကားသမားမြား တှကျခွမေကိုကျ ဖွဈနကွေကွောငျး ဆယျဘီးကားသမား ကိုအောငျနိုငျက ပွောသညျ။
ကျွန်မ ကွန်ပျူတာ ဘဲ မှားနေလား။
အောက်ပိုင်းစာတွေ ကို ဖတ်မရဘူး။
fontနှစ်မျိုးနဲ့ သုံးထားလို့ပါ၊ကြည့်ချင်ရင်တပိုင်းချင်းစီကိုofficeထဲကိုnew page နှစ်ခုခွဲဖွင့်၍ထည့်ပါ အဆင်ပြေစွာကြည့်၍ ရသွားပါလိမ့်မည်။
နတ်ဆိုးလေး မှန်ဘဲ ထောင်ကြည့်ပြီးဖတ်ရမလား…..ဒါမှမဟုတ် ယစ်ရွှေရည်လေး ကစ်ပြီးတော့ဖတ်ရမလား ကိုကို ဘုန်းရယ်………..
အပေါ်က စာတွေက Zawgyi-one ဖောင့်နဲ့ ရေးထားတာ …
အောက်က စာတွေက Myanmar3(Unicode) ဖောင့်နဲ့ ရေးထားတာလို့ ထင်ပါတယ် ….
အောက်က စာတွေ ဖတ်ချင်ရင် Myanmar3 နဲ့ ဖတ်မှ ရပါမယ် …
Myanmar3Font မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနေရာတွေမှာ သွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ် …
myanmar3unicode မှ ဟုတ်ရဲ့လားကွယ်
မှတ်ချက်။အချို့ ဝါးတားဂိတ်တစ်ခုတွင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ အတူကောက်ခံနေသည်လည်းရှိသည်။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ ဆိုတာလေးကိုမရှင်းလို့ဘယ်အဖွဲ့ တွေများဖြစ်နိုင်မလဲလို့သိချင်မိပါတယ်..
ဖတ်မရအောင် ရေးမှဘဲ အဆဲ မခံရတော့တယ် . အဟိ .. :grin: :grin:
ဂြိုလ်သားစာတွေလားမသိဘူး………… လဘုန်းကျော်ကတော့ လုပ်လိုက်ပြန်ပီ